China Pet ngere Manufacturer na Supplier | Ruiyi
Mere nke inogide ígwè metal na nchara na-àmà nwa imecha; zọta ụzo; 2 ndozi-mkpọchi slide-bolt latches.
Mee mgbatị ahụrụ ahịhịa ka ọ dị mfe maka nchekwa dị mma. Ogige ọ bụla na-abịa na osisi osisi iji chebe ha n'ala mgbe ejiri ya n'èzí. Nzọụkwụ-Thru pet nsu na-agụnyekwa ihe nkwụnye nkuku iji tinye nkwụsi ike ma debe nhazi usoro anụ ụlọ.
Mfe iji chekwaa & Transportgbọ njem
Mmega pet nsu n'ogige atụrụ ewepụghị maka adaba nchekwa. Ogige ọ bụla na-abịa na osisi osisi iji chebe ha n'ala mgbe ejiri ya n'èzí. Nzọụkwụ-Thru pet nsu na-agụnyekwa ihe nkwụnye nkuku iji tinye nkwụsi ike ma debe nhazi usoro anụ ụlọ.
Exercise Pen nwere ogwe njikọ 8 (ogwe ọ bụla 24W x 24H Inches) iji mepụta 16 SQFT ebe obibi | Playpen dị mma maka obere nkịta ruru 16 sentimita asatọ n'ogologo.
Ime ụlọ / n'èzí na-ebugharị 30-inch na mgbatị mmega ahụ na ọnụ ụzọ; maka nkịta ndị ruru 20 sentimita asatọ n'ogologo.
Ogwe njikọ 8, nke ọ bụla dị 30 sentimita 24; emepụta ogige 16-square-foot.
Setịpụrụ na sekọnd; naanị mepee, ọdịdị, ma jikọọ - ọ dịghị ngwaọrụ achọrọ; apịtị dị larịị maka kọmpat nchekwa.
Mgbatị Egwuregwu Pen dị mma maka ime ụlọ na n'èzí, e-uwe nchara na-egbochi ojii na-echebe nkịta nkịta site na ihe ndị dị na ya & tinyekwa osisi osisi na-eme ka pen ahụ gbanye n'ala.
Enweghị ngwaọrụ achọrọ. Naanị imeghe, ọdịdị & jikọọ nkịta playpen ọnụ, mgbatị pen nwere ike ịtọ-elu na sekọnd & folds flat maka mfe nchekwa ma ọ bụ njem.
Zọ Nzọụkwụ Na-aga
Nzọụkwụ site n'ọnụ ụzọ na-egosipụta ihe mkpuchi slide abụọ nwere nchebe ma na-enye ụzọ mbata ma dịkwa mfe ma ọ bụ nsogbu maka anụ ụlọ gị - ma ọ bụ maka gị mgbe ịchọrọ inye nlekọta dị ka juputa mmiri na efere nri.
Ngwa & Mfe na-ezukọ
Sgosipụta ogwe ogwe wee pịa ha ọnụ yana obere vidiyo ndị a gụnyere. Hazie anụ ụlọ gị na gburugburu ma ọ bụ akụkụ anọ na sekọnd.
Nha 82 * 56 * 2CM
N'ime ọhịa ma ọ bụ ime ụlọ na ebe nwere nnukwu ohere, debe anụ ụlọ ka ha dọrọ n'agha iji chebe ha ka ha ghara ịgba gburugburu.
Lee ngwaahịa ntuziaka maka ụfọdụ echichi。
Ma ọ bụ kpọtụrụ anyị.
Asịwo nzaghachi mma dị mma, dị irè ma dị mfe, ikike na-ebu ibu, ogologo ndụ ọrụ, mgbakọ na-adaba adaba.
Anyị na-atụ anya ka ị bụrụ onye mere nkebiahịrị na-esote.
Nke gara aga: wiilbaro
Osote: PU ụkwụ
Caster ụkwụ anọ, China Pu ụfụfụ Wheel, PU Wheel, Concrete igwekota Truck, China PU wiil, China Concrete igwekota,